မြတ်စုရင် ဘွန်ဇိုင်းအရောင်းဆိုင် | www.yinmaung.com
Bonsai and Short Stories
HomeBonsai (ဘွန်ဇိုင်း)Short Stories (ဝတ္ထုတိုများ)Contact Us (ဆက်သွယ်ရန် )Available Bookshops
Posted on January 20, 2011 by Yin Maung	ဘွန်ဇိုင်းဝါသနာရှင်များအတွက် ရင်မောင် (မြတ်စုရင်) ကိုယ်တိုင်ပြုစု စိုက်ပျိုးထားသော ဘွန်ဇိုင်းများကို ဆိုင်အမှတ် (C.3)၊ မြေပဒေသာ အရောင်းဆိုင်ခန်းများ၊ ကန်တော်ကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၌ ဖွင့်လှစ် ရောင်းချပေးနေပါသည်။
Recommend on Facebook Tweet about it This entry was posted in ဘွန်ဇိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်နည်း. Bookmark the permalink.	11 Responses to မြတ်စုရင် ဘွန်ဇိုင်းအရောင်းဆိုင်
ohnmaungmaung says:	January 31, 2011 at 6:26 pm	ဘာအတွက်ပြုံးနေတာပါလဲ
Reply	alter says:	February 7, 2013 at 4:25 am	ဦးရဲ့ စာအုပ်က ဘယ်လိုမှ ၀ယ်လို့ မ၇ပါဘူး
1987 တုန်းက ထွက်တဲ့ စာအုပ်တော့
ကျွန်တော့ဆီမှာရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ 
မြေကြီးစပ်တဲ့ အခန်းမှာ သေချာေ၇း
မထားလို့အခက်တွေ့ နေပါတယ် ဦးစာအုပ်လဲ
၀ယ်လို့ မ၇တော့ မြေကြီးအကြောင်းပို့စ်လေး တစ်ခုလောက်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
comment အနေနဲ့ေ၇းပေးလဲရပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Reply	Thet Naung Oo says:	March 1, 2013 at 6:19 am	ကျွန်တော့်ရဲ့ အပင်ကတော့ မြင့်တတ်လာတယ်။ ဘယ်လို ဆက်လုပ်ရမလဲ။ အခုတော့ ဦးရဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်နေပါတယ်။ ပုံလေးပို့ပေးချင်ပါတယ် ။ဘယ်ကိုပို့ပေးရမလဲ ခင်ဗျာ
Reply	yinmaung says:	July 15, 2013 at 1:37 pm	ဘွန်ဇိုင်းလုပ်တာမှာ အဓိကကျတာကတော့ top growth ကို ဖြတ်ပေးရတာပါပဲ။ ကိုယ်ထားချင်တဲ့ အမြင့်ထက် နည်းနည်းလျှော့ချန်ပြီး ဖြတ်ပစ်ပါ။ yinmoung@gmail.comကို ပုံပို့ပေးလို့ ရပါတယ်။
Reply	Aung Khant says:	January 22, 2015 at 11:37 am	ဦးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးသိပါရစေဗျ
Reply	moethout says:	June 23, 2013 at 1:07 pm	ဦးရေ
ပါ .ဦးရေးတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြီး အပင်လေးတွေစမ်းသပ်ပြီးပျိုးကြည့်နေပါတယ်.အဲ့ဒီအတွက်ဦးကိုအရမ်းကျေဇူးတင် ပါတယ်.
Reply	yinmaung says:	July 15, 2013 at 1:32 pm	အကူအညီလိုရင်ပြောပါ။ ဖုန်းဆက်မေးရင်လည်း ရပါတယ်
Reply	့မီမီ says:	July 5, 2013 at 3:35 pm	bonsai တစ်ပင်ဈေး က ခန့် မှန်းချေ ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ ?
Reply	yinmaung says:	July 15, 2013 at 1:31 pm	ဘွန်ဇိုင်းအပင်ဈေးနှုန်းက လေးငါးသောင်း အနည်းဆုံးရှိပါတယ်။ ဘွန်ဇိုင်းမဖြစ်သေးတဲ့အပင်တွေရဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အတော်လေးကွာပါတယ်။ သိန်းဂဏန်းအထက်တွေလည်း ရှိတယ်။ မျိုးရှားတာရယ်။ စတိုင်လှတာရယ်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။
Reply	ဗိုက်ကလေး says:	May 14, 2014 at 3:19 pm	ဒီနေ့ ကျနော် ဦး ရဲ့ စာအုပ်ထဲက တစ်အုပ်ဖြစ်တဲ့ ဘွန်ဇိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ ထိမ်းသိမ်းပြုပြင်နည်း စာအုပ်ဝယ်လာပါတယ် စိတ်ဝင်စားတာတော့ကြာပါပီ ခုမှ စလုပ်မှာပါ ဘယ်အပင်အမျီုးစားနဲ့ စရင် အဆင်ပြေမလဲခင်ဗျာ အကြံညဏ်လေးပေးပါ ဆိုင်မှာက စာအုပ်၂အုပ်ပဲရှိတယ်ဗျ နောက်တအုပ်မနက်ဖန်မှသွားဝယ်ရမယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျနော်က မန်းလေးကပါ
Reply	su nyo says:	September 25, 2014 at 5:16 am	ဘွန်ဇိုင်းအပင်လေးတွေကိုစိတ်စားပါ။အနီးကပ်လာလေ့လာလို့ရမလားလို့သိချင်ပါတယ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Bonsai (ဘွန်ဇိုင်း)ဘွန်ဇိုင်းစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်နည်း
ဘွန်ဇိုင်း သိမှတ်ဖွယ် ၁၀၁ချက်